गर्भवतीले नियमित जाँच र खाेप समेत पाएनन्
रिपोर्ट बुधबार, जेठ ७, २०७७
कोरोनाभाइरसको जोखिम र बन्दाबन्दीको यो वेला संक्रमणको डर र अस्पताल जान सवारी साधन नहुँदा गर्भवतीहरूले नियमित जाँच गर्न सकिरहेका छैनन्।
काठमाडौंको सुकेधारा बस्ने गीता थापा सात महीनाकी गर्भवती छिन्। गर्भ ५/६ महीना पुगेपछि एक महीनाको फरकमा दुई पटक लगाउनुपर्ने धनुष्टंकार विरुद्धको टीडी खोप उनले अन्तिम पटक लगाउन पाएकी छैनन्। त्यसका लागि अस्पताल जान नसकेको उनको गुनासो छ।
“लकडाउन अब त खुल्ला भनेको, झन् संक्रमित बढ्दैछन्”, गीता भन्छिन्, “अस्पताल जान आफ्नो गाडी पनि छैन, डरले जानै सकेको छैन।” कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिमको वेला अस्पतालमा हुने भीडभाड सम्झेर उनलाई झन् डर लागेको छ।
ललितपुरको भैसेंपाटी बस्दै आएकी पाँच महीनाकी गर्भवती सिर्जना खनाल बन्दाबन्दीले विभिन्न समस्या निम्तिएको बताउँछिन्। नियमित जाँच गर्न र डीटी खोप लगाउन उनी २९ वैशाखमा पाटन अस्पताल पुगिन्। तीन घण्टा पर्खिंदा पनि पालो आएन। सबै ठाउँमा जस्तै अस्पताल आसपासका खाजा पसल र फलफूल पसल यतिवेला बन्द छन्। पानी मात्रै बोकेर गएकी उनी भोक सहन नसकेर जाँच नगराई फर्किन्।
“भोलिपल्ट जाँदा झन् भीड थियो, त्यसपछि निजी अस्पताल गएर जाँच गराएँ र खोप लगाएँ”, उनी भन्छिन्। महामारीको वेला गर्भावस्थामा अझ सचेत हुनुपर्ने भएकाले कसैले झुक्केर छोइँदा समेत डर लाग्ने उनी बताउँछिन्।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथामका लागि झण्डै दुई महीनादेखि लगाइँदै आएको बन्दाबन्दीका कारण गीता, सिर्जना जस्ता धेरै जना गर्भवतीहरू अहिले समस्यामा परिरहेका छन्। गर्भवती भइसकेपछि नियमित जाँच गराइरहनुपर्ने हुन्छ। अल्ट्रासाउण्ड परीक्षणबाट गर्भको शिशुको अवस्था, वृद्धि विकास, पाठेघरमा रहने पानीको अवस्था आदिबारे थाहा हुन्छ र सम्भावित जोखिमको निक्र्योल पनि गरिन्छ।
नियमित जाँचतर्फ पहिलो पटक चौथो महीनामा, दोस्रो पटक छैटौं महीनामा, तेस्रो आठौं र चौथो पटक नवौं महीनामा अनिवार्य जाँच गर्नुपर्छ। त्यस बाहेक पनि आवश्यकता अनुसार जाँच गराइरहनुपर्छ। तर, बन्दाबन्दीकै कारण नियमित जाँच गराउन गाह्रो भइरहेको गर्भवतीहरू बताउँछन्। यो समस्या काठमाडौं उपत्यका बाहिर झन् बढी छ।
झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी कुसुम काफ्ले चार महीनाकी गर्भवती छिन्। चार महीनामा गर्नुपर्ने नियमित जाँच गर्न नपाएको र निःशुल्क पाइने आइरन चक्की पनि किनेर खानुपरिरहेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, “स्वास्थ्य त ठीकै छ, तर अनिवार्य जाँच गराउनुपर्ने समयमा अस्पताल गएर परीक्षण गर्न नपाउँदा डर लाग्ने रहेछ।” अहिले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्यमा ध्यान दिइरहेको उनी बताउँछिन्।
नियमित परीक्षणसँगै गर्भवतीले फोलिक एसिड औषधिको सेवन गर्ने, धनुष्टङ्कार विरुद्धको सुई लगाउने, आइरन, क्याल्सियम लगायतका औषधि नियमित रुपमा खानुपर्छ। तर, कतिपय ठाउँमा यस्तो औषधिको सहज आपूर्तिमै समस्या देखिएको छ।
अर्जुनधारा नगरपालिका–१ सिस्ने टोलकी स्वस्थ्य स्वयंसेविका शान्ता खनाल आचार्य निःशुल्क पाउने आइरन चक्की, अस्थायी साधनका पिल्स सकिएकाले गर्भवती तथा अस्थायी साधन प्रयोगकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछिन्। “निःशुल्क आइरन चक्की दिन नसके पनि टोलमा रहेका गर्भवतीहरुको अवस्था बुझ्ने र आवश्यक सल्लाह दिने गरिरहेकी छु”, उनी भन्छिन्।
गर्भवती बढी सचेत हुनुपर्ने वेला
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर पवन शर्मा संक्रामक महामारी फैलिएको यो वेला गर्भवतीले थप सजगता अपनाउनुपर्ने भएकाले अस्पताल जानैपर्ने अवस्था नभएसम्म नजान सुझाव दिन्छन्। सामान्य अवस्थामा फोन वा भाइबरबाट डाक्टरको सल्लाह लिन सकिने उनी बताउँछन्।
डा. शर्माका अनुसार, प्रतिष्ठानले अहिले नियमित परीक्षणसँगै भाइबर मार्फत गर्भवतीहरुलाई सुझाव दिइरहेको छ। उनी गर्भवतीहरूलाई सकेसम्म भीडभाडमा नजान आग्रह गर्दै सुझाव दिन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा गर्भवती अत्यावश्यक अवस्था नभएसम्म अस्पताल नजाँदा हुन्छ। सामान्य अवस्था छ भने घरमै बसेर फोन वा भाइबरबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो समस्या जानकारी गराएर सुझाव लिनुहोला।” उनले पनि पछिल्लो समय गर्भवतीहरूलाई भाइबरबाट सुझाव दिंदै आएका छन्।
डा. शर्मा अहिले अस्पताल जानुभन्दा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रक्तचाप जाँच गराउन, आइरन चक्की नियमित खाने, पौष्टिक आहार र सन्तुलित भोजन खान, २४ देखि २८ हप्ताबीचमा नजिकैको ल्याबमा मधुमेह जँचाउन, घरको कोठामा सामान्य व्यायाम गर्न सुझाव दिन्छन्।
अस्पताल जाँदा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, स्यानिटाइजर साथैमा बोक्न डा. शर्मा सुझाव दिन्छन्।
पाटन अस्पतालमा बुधबार र शनिबार बाहेक गर्भवतीको जाँच हुने गरेको छ। हरेक सोमबार र बिहीबार पाठेघरको समस्या भएकाहरुको उपचार हुने डा. शर्माले जानकारी दिए।
संक्रमण जोखिम घटाउन प्रसूति गृहको प्रयास
काठमाडौं थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नियमित परीक्षणका लागि अहिले दैनिक तीन सयभन्दा बढी गर्भवती पुग्ने गरेका छन्। कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्।
अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पताल आउनैपर्ने आवश्यकता परेपछि मात्र आउन र सामान्य अवस्थामा टोलफ्री, फोनबाट सुझाव लिन सल्लाह दिने गरेको उनको भनाइ छ। “ गर्भवती महिलालाई भ्यागुतेरोग र धनुष्टंकार रोग विरुद्ध टीडी खोप लगाउन, सुत्केरी हुन वा जटिल समस्या देखिए तुरुन्तै अस्पताल आउन भन्ने गरेका छौं”, डा. गौतम भन्छन्, “सामान्य अवस्थामा आवश्यक सुझाव टोल फ्री र सम्बन्धित डाक्टरसँग फोनमा कुरा गरेर लिन प्रेरित गरिरहेका छौं।”
बन्दाबन्दीका कारण अहिले प्रसूति गृहमा नियमित जाँच गर्न आउनेको संख्या घटेको छ। त्यस्तै, अत्यावश्यक सेवा लिने दैनिक सयको हाराहारीमा छन् भने ५० देखि ६० जनाले बच्चा जन्माउने गरेको निर्देशक गौतमले बताए।
याे पनि हेर्नुहाेस् – नौ महीनाकी गर्भवतीको पिरलो : श्रीमान् भारतमा छट्पटाइरहेका छन्, म यता
गर्भवतीले कुन अवस्थामा तत्काल अस्पताल जाने ?
– टीडी खोप लगाउनुपरेमा
– बच्चा राम्रोसँग चलेन भन्ने लागेमा
– पेट दुखाइ बढेमा वा हिजोको भन्दा फरक तरिकाले दुखेमा
– योनिबाट पानी बगेमा, रगत देखिएमा
– रक्तचाप बढेमा
– खुट्टा धेरै सुन्निएमा
– ३६ वा ३७ हप्ता भएपछि भने सुत्केरी हुने तालिका मिलाउन र आवश्यक सल्लाह लिन।